Uncategorized – Page2– Open History Project (Hpa-an)
Open History Project (Hpa-an)
Untold and hidden history through photographs are which collected to tell the younger generation
ဘားအံမြို့ရဲ့ ခရီးသွားမိတ်ဆွေ Nan Hpa-an
ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ကို Prize Sponsor အနေနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီပေးမယ့် နောက်ထပ် လုပ်ငန်းတစ်ခုက Nan Hpa-an ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘားအံမှာ နေပူတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်၊ မိုးရွာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ် သွားစရာ လာစရာ ကိစ္စပေါ်ရင် နန်းဘားအံလေးတွေကိုဘဖုန်းဆက်ခေါ်ယူလို့ရပါတယ်။ အိမ်အရောက်လာကြိုပေးပါတယ်နော်။ ၿမိဳ႕တြင္ မြို့တွင်းဘယ်သွားသွားတိုက်ရိုက်ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်း ၂၀၀၀ ကျပ်။ တစ်နာရီငှါးရမ်းခ. ၄၀၀၀ ကျပ်။နေ့တစ်ဝက် ငှါးရမ်းခ ၁၈၀၀၀ ကျပ်။ (၅နာရီ)တစ်နေ့လုံး ငှါးရမ်းခ ၃၅၀၀၀ ကျပ်။ (၁၀ နာရီ) တစ်နာရီငှါးရမ်းခ. ၄၀၀၀ ကျပ်။နေ့တစ်ဝက် ငှါးရမ်းခ ၁၈၀၀၀ ကျပ်။ (၅နာရီ)တစ်နေ့လုံး ငှါးရမ်းခ ၃၅၀၀၀ ကျပ်။ (၁၀ နာရီ)ကို်ယ် အချိန်ကိုက်သွားရမယ့်ကိစ္စလေးတွေရှိရင်တော့ နာရီဝက်ဖုန်းကြိုဆက်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ နန်းဘားအံကို ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့ 09 698 559Continue reading “ဘားအံမြို့ရဲ့ ခရီးသွားမိတ်ဆွေ Nan Hpa-an”
Posted bypansodan gallery August 26, 2019 December 21, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ဘားအံမြို့ရဲ့ ခရီးသွားမိတ်ဆွေ Nan Hpa-an
ဘားအံမြို့နေရာအနှံ့အပြားမှာ နေရာယူနေတဲ့ ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ဗီနိုင်းစတစ်ကာများ
ဘားအံမြို့နေရာအနှံ့အပြားမှာ နေရာယူနေတဲ့ ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ဗီနိုင်းစတစ်ကာများ စက်တင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမယ့် ဆင်ယင်မှုပွဲတော်အကြောင်းကို လူမှုကွန်ရက်တွင် ကြော်ငြာရုံသာမက၊ ဘားအံမြို့ရှိ ဖက်ရှင်နှင့်ပတ်သတ်သည့်ဆိုင်များ၊ အလှပြင်ဆိုင်များနှင့် ယခုပွဲတော်ကို စိတ်ဝင်စားသည့်ဆိုင်များတွင် ချိတ်ဆွဲကြေငြာကာ လူထုအား အသိပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဗီနိုင်းချိတ်ဆွဲမှုကို ဦးခန့်ဇော်အောင်၊ ဦးသန့်စင်နှင့် ကိုလွှမ်းမိုးအောင်တို့မှ တာဝန်ယူချိတ်ဆွဲပြီး နယ်ခံများကလည်း ဝိုင်ဝန်းကူညီတပ်ဆင်ပေးကြပါသည်။ ဆင်ယင်မှုပွဲတော်၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်နှင့်ပတ်သတ်သည့် လက်ကမ်းစာစောင်များဝေမျှပေးခဲ့ပြီး ပွဲတော်အကြောင်းများ ရှင်းလင်းဝေမျှကြပါသည်။ ဆင်ယင်မှုပွဲဲတော် ဗီနိုင်းစတစ်ကာများ ကပ်ခွင့်ပေးပါသော ဆိုင်များ၊ ခန်းမများနှင့် တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများ၊ ဝိုင်ဝန်းကူညီပေးတပ်ဆင်ပေးကြပါသော သူတစ်ဦးချင်းစီကို Open History Project မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ယခုလာမည့် ဆင်ယင်မှုပွဲတော်တွင် ကရင်အဝတ်အစားဖက်ရှင်ပြိုင်ပွဲ၊ အနုပညာထုတ်ကုန် စျေးရောင်းပွဲတော်နှင့် ကရင်ရိုးရာဒုံးယိမ်းအက၊ ဂီတဖျော်ဖြေမှုများနှင် တင်ဆက်ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို လာရောက်ပါရန်လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ မေးမြန်းလိုသည်များကို “OpenContinue reading “ဘားအံမြို့နေရာအနှံ့အပြားမှာ နေရာယူနေတဲ့ ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ဗီနိုင်းစတစ်ကာများ”
Posted bypansodan gallery August 20, 2019 December 21, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ဘားအံမြို့နေရာအနှံ့အပြားမှာ နေရာယူနေတဲ့ ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ဗီနိုင်းစတစ်ကာများ
Sweet fashion ကရင်ရိုးရာ အထည်ဆိုင်
ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ရိုးရာအနုပညာထုတ်ကုန်စျေးရောင်းပွဲတော်တွင် ရောင်းချမည့် ဆိုင်များမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Sweet fashion ကရင်ရိုးရာ အထည်ဆိုင်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ပြဲေတာ္ရက္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူးရက္မ်ားတြင္ ဘားအံျမိဳ႕ရွိ၊ လူၾကီး၊ လူငယ္၊ ကေလးမ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းပွဲတော်ရက်များနှင့် နှစ်သစ်ကူးရက်များတွင် ဘားအံမြို့ရှိ၊ လူကြီး၊ လူငယ်၊ ကလေးများကြားတွင် ရေပန်းစားလေ့ရှိသော Sweet Fashion ကရင်ရိုးရာ ဖက်ရှင်ဆိုင်သည် (၇.၁၁.၂၀၁၇) တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သော ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်ယင်မှုပွဲတော်တွင် ရောင်းချမည့်ပစ္စည်းများမှာ ဂျတ်ခုတ်ထည်များကို အဓိကထားပြီး အခြားသော ယက်ကန်းထည်းများကိုလဲ ခင်းကျင်းပြသထားမှာဖြစ်ပါသည်။ “ကျွန်​မတို့ Sweet fashion ကရင်​ရိုးရာအထည်​ဆိုင်​မှ ​ရောင်​းချ​ပေး​နေသ​သော ကရင်​ရိုးရာဂျပ်​ခုတ်​ထည်​၊ ယက်​ကမ်​းထည်​နှင်​့ ချင်​းမိုင်​ထည်​များအား ဆင်​ယင်​မှုပွဲ​တော်​တွင်​ အများပြည်​သူများမှ ကြည်​့ရှု​လေ့လာဝယ်​ယူဆင်​ယင်​နိုင်​ရန်​နှင်​့ ရိုးရာဓ​လေ့ထုံးတမ်​းအစဉ်​အလားများအား မျိုးဆက်​သစ်​လူငယ်​များအ​နေဖြင်​့ ချစ်​ခင်​မြတ်​နိုးထိန်​းသိမ်​းတတ်​​စေရန်​အတွက်​ ရည်​ရွယ်​ပါတယ်” ဟု ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ ပြောပြပေးသည်သာမကContinue reading “Sweet fashion ကရင်ရိုးရာ အထည်ဆိုင်”
Posted bypansodan gallery August 19, 2019 December 21, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on Sweet fashion ကရင်ရိုးရာ အထည်ဆိုင်
ဆင်ယင်မှုပွဲတော်၏ Catwalk Trainer အလှမယ် နန်းထက်ထက်လင်း
ဆင်ယင်မှုပွဲတော် ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ အလှမယ်များအား အလှပြလျှောက်လမ်းတွင် လှပကျော့ရှင်းစွာ ပြသနိုင်ရန် Catwalk Trainer အဖြစ် ဝင်ရောက်အားဖြည့်ပေးမယ့်သူကတော့ အလှမယ်နန်းထက်ထက်လင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော Miss Tourism Global Queen အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွင် Winner တစ်ဦးဖြစ်သော နန်းထက်ထက်လင်းသည် Beauty Industry တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝမှစပြီး ကာယအလှမယ်ပြိုင်ပွဲများ၊ Modern Physique ပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ Miss Universe Myawaddy winner ဆုကို ၂၀၁၇နှစ်ခုနှစ်တွင် ဆွတ်ခူးရရှိပြီး Miss Universe Myanmar 2017 ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် Miss Body Perfect title ဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယခုတွင် ဘားအံမြို့ရှိ “Perfect Body”Continue reading “ဆင်ယင်မှုပွဲတော်၏ Catwalk Trainer အလှမယ် နန်းထက်ထက်လင်း”
Posted bypansodan gallery August 17, 2019 December 21, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ဆင်ယင်မှုပွဲတော်၏ Catwalk Trainer အလှမယ် နန်းထက်ထက်လင်း
Crown Souvenir & Gift Shop
ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ရိုးရာအနုပညာထုတ်ကုန်စျေးရောင်းပွဲတော်တွင် ရောင်းချမည့် ဆိုင်များမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Crown Souvenir & Gift Shop နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဘားအံမြို့ကို လာရောက်လည်ပတ်သည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဧည့်သည်များ၏နှုတ်ဖျားတွင် ရေပန်းစားသည့် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား စုံလင်လှသော အမှတ်တရလက်ဆောင်ဆိုင်လေးကို (29.6.2017) ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဓိကရောင်းကုန်တွေက လက်မှုပစ္စည်းများ ရိုးရာနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများ ရိုးရာပိတ်များဖြင့်ချုပ်လုပ်ထားသောအိတ်များ သစ်သားပစ္စည်းများ အုန်းသီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်မှုပစ္စည်းများ စက္ကူဖြင့်ဖန်တီးထားသောလက်မှုပစ္စည်းများ Handmadeဆွဲကြိုးများ လက်ပတ်များ နားဆွဲများ သော့ချိတ်အမျိုးမျိုး ရေခဲသေတ္တာမှာကပ်လို့ရသော အမှတ်တရ သံလိုက်ကပ်ပစ္စည်းလေးများ ချည်ပုဝါများ အစရှိတဲ့ Handmade ပစ္စည်းမျိုးစုံဖြစ်ပါသည်။ ပွဲတော်အတွင်းမှာတော့ ရိုးရာ Handmade ဆွဲကြိုးများ လက်ပတ်များ နားဆွဲများ သော့ချိတ်များ နှင့် အိတ်များ အုန်းသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေရောင်းချပေးသွားပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ “ဒီလိုဆင်ယင်မှုပွဲတော်လေးတွေလုပ်ပေးချင်းအားဖြင့် မိမိတို့ရဲ့ရိုးရာအဝတ်အစားဒီဇိုင်းများကို မကွယ်ပျောက်သွားအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ထိန်းသိမ်းပေးရာရောက်စေပီးContinue reading “Crown Souvenir & Gift Shop”
Posted bypansodan gallery August 16, 2019 December 21, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on Crown Souvenir & Gift Shop
ကောင်းကင်ပြာ (Karen Traditional Dress and Chiangmai Cotton)
ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ရိုးရာအနုပညာထုတ်ကုန်စျေးရောင်းပွဲတော်တွင် ရောင်းချမည့် ဆိုင်များမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ကောင်းကင်ပြာ (Karen Traditional Dress and Chiangmai Cotton) ဆိုင်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ကောင်းကင်ပြာ အထည်ဆိုင်ကို၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ကရင့်ရိုးရာ လူးဘယ်ဂျပ်ခုပ်ထည်များ ရက်ကန်းထည်များနှင့် ယိုးဒယားချင်းမိုင်အထည်များရောင်းပြီး ဘားအံမြို့ရှိ လူငယ်များ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများကြားတွင် ရေပန်းစားသော ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ဆင်ယင်မှုပွဲတော်တွင် ကရင့်ရိုးရာဂျပ်ခုပ်လက်ယက်ထည်တွေ၊ လက်ယက်ကန်းတွေ ယိုးဒယားချင်းမိုင်အထည်လေးတွေ handmadeလေးတွေ ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် “ဒီဘက်မှာထုပ်လုပ်မှုနည်းပါလာပြီးဖြစ်တဲ့ ကရင့်ရိုးရာhandmadeတွေကိုအိမ်တွင်မှုလုပ်ငန်းအနေနဲ့ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်လာအောင်ရှေးရိုးရာအဆင်တွေကိုပြန်လည်ယက်လုပ်ပြီးအမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားဝတ်ဆင်လာအောင် ပြီးတော့ခေတ်နဲ့အညီရိုးရာအဆင်တွေကို အဆင်ဆန်းလေးအရောင်ဆန်းလေးဖြင့် လူမျိုးမရွေး နေရာမရွေး ဝတ်ဆင်လို့ရနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးယက်လုပ်ပြီး အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပြီး ဝယ်ယူသူတွေနှစ်သက်ကျေနပ်အားရမှုရှိအောင်ထုပ်လုပ်သွားမယ် လို့ရည်ရွယ်မျှော်မှန်းထားပါတယ်” လို့ ကောင်းကင်ပြာ (Karen Traditional Dress and Chiangmai Cotton) ၏Continue reading “ကောင်းကင်ပြာ (Karen Traditional Dress and Chiangmai Cotton)”
Posted bypansodan gallery August 15, 2019 December 21, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ကောင်းကင်ပြာ (Karen Traditional Dress and Chiangmai Cotton)
ဆင်ယင်မှုပွဲတော်တွင် ပြသရောင်းချသွားမည့် ပီတိ (တိုင်းရင်းသားရိုးရာနှင့်ပိုးထည်)ဆိုင်
ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ရိုးရာအနုပညာထုတ်ကုန်စျေးရောင်းပွဲတော်တွင် ရောင်းချမည့် ဆိုင်များမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ပီတိ (တိုင်းရင်းသားရိုးရာနှင့်ပိုးထည်) ဆိုင်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ပီတိ (တိုင်းရင်းသားရိုးရာနှင့်ပိုးထည်) ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆိုင်တွင် အဓိကအားဖြင့် ကရင်ရိုးရာဂျပ်ခုတ်ထည်၊ ကရင်ရိုးရာပိုးထည်၊ သဘာဝဆိုးဆေးချည်ပုဝါများ၊ ကရုင်ရိုးရာအမှတ်တရပစ္စည်းများကို ဂုဏ်ယူစွာ ရောင်းချပေးနေသည့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ဆင်ယင်မှုပွဲတော်တွင်လည်း ကရင်ရိုးရာပန်းချီရေးအထည်နှင့် အမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ ကရင်ရိုးရာ ရက်ကန်းအကျႌ၊ ဂျပ်ခုတ်အကျႌ၊ ကရင်ရိုးရာ ချည်ပုဆိုး/ပိုးပုဆိုနှင့် သဘာဝဆိုးဆေး နှင့် ချည်ထည်အမျိုးမျိုးကိုလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်။ ဆင်ယင်မှုပွဲတော်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး “ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့လို့ပြောလိုက်တာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မိမိတို့၏ ကရင်ရိုးရာအခြေခံ ထုတ်ကုန်များကို ရင်ထဲအမှတ်ရစေလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ပီတိ (တိုင်းရင်းသားရိုးရာနှင့်ပိုးထည်) ၏Continue reading “ဆင်ယင်မှုပွဲတော်တွင် ပြသရောင်းချသွားမည့် ပီတိ (တိုင်းရင်းသားရိုးရာနှင့်ပိုးထည်)ဆိုင်”
Posted bypansodan gallery August 13, 2019 December 21, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ဆင်ယင်မှုပွဲတော်တွင် ပြသရောင်းချသွားမည့် ပီတိ (တိုင်းရင်းသားရိုးရာနှင့်ပိုးထည်)ဆိုင်
Social Media တွင် ဆင်ယင်မှုပွဲတော် Event ကြေငြာသည့် Link များ
Posted bypansodan gallery August 12, 2019 December 21, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on Social Media တွင် ဆင်ယင်မှုပွဲတော် Event ကြေငြာသည့် Link များ
ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီမှ ဖက်ရှင်ပြိုင်ပွဲအတွက် “Prize Sponsors”များ ခေါ်ယူခြင်း
ယင်မှုပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီမှ ဖက်ရှင်ပြိုင်ပွဲအတွက် “Prize Sponsors”များ ခေါ်ယူခြင်း စက်တင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ဆင်ယင်မှုပွဲတော် ဖက်ရှင်ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ပြိုင်ကြမည့် ပြိုင်ပွဲဝင် ဒီဇိုင်းဝါသနာရှင်များနှင့် လျှောက်လှမ်းမော်ဒယ်များအတွက် ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ကျင်းပရေး ကော်မတီမှ “Prize Sponsors” များခေါ်ယူနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဘားအံမြို့ရှိ လုပ်ငန်းရှင်လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ Brand (သို့) Product ကို ထိရောက်စွာ သိမှတ်စေမည့် အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည့်အတွက် ယခု အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲ အမြန်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ဘားအံမြို့မှ လူငယ်များနှင့် ရိုးရာဝတ်စားဆင်ယင်မှု ဒီဇိုင်းကိုမြတ်နိုးသော လူထုအများဆင်နွဲမယ့်ပွဲတော်တွင် ဘားအံမြို့မှလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်များအား “Prize Sponsors” အနေဖြင့် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏စိတ်ဝင်တစားပံ့ပိုးမှုကို ကရင်ရိုးရာ ဆင်ယင်မှုပွဲတော်တွင် သက်သေပြနိုင်ပါပြီ။ မှတ်ချက် – ဆင်ယင်မှုပွဲတော်သည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်တစ်စုံတရာကို မျှော်ကိုးသည့် အစီအစဉ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။Continue reading “ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီမှ ဖက်ရှင်ပြိုင်ပွဲအတွက် “Prize Sponsors”များ ခေါ်ယူခြင်း”
Posted bypansodan gallery August 9, 2019 December 21, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီမှ ဖက်ရှင်ပြိုင်ပွဲအတွက် “Prize Sponsors”များ ခေါ်ယူခြင်း
“ဘာကြောင့် နာရီတွေနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ လုပ်အားပေး Volunteering Record တွေက အရေးကြီးတာလဲ”
“ဘာကြောင့် နာရီတွေနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ လုပ်အားပေး Volunteering Record တွေက အရေးကြီးတာလဲ။” လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ၊ အဆင့်မြင့်တဲ့ပညာရေး၊ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ပြည့်နက်နေပြီး လူငယ်တွေစုန်းတဲ့ ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကို လူငယ်တိုင်း လိုချင်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ Scholorship တွေ၊ Exchange Programs တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုများလာသလို ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေက ပိုပြီးပြင်းထန်လာပါတယ်။ ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာ ရွေးချယ်တဲ့သူတွေ အများဆုံး ဦးစားပေးမေးမြန်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေက Volunteering Experience တွေနဲ့ Leadership Experience တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Volunteering Experience တွေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာလည်း အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမှာ နည်းစနစ်နဲ့ တာဝန်ခွဲခြမ်းလုပ်တဲ့ လုပ်အားပေးမျိုးလားဆိုတာကိုလည်း ထပ်မံစီစစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်နှစ်နာရီလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ သက်သေအထောက်အထားကိုလည်း မေးမြန်းပါတယ်။ ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုလည်း နယ်ကလူငယ်တွေတော်တော်များများနဲ့ လက်လှမ်းမှီဖို့ နည်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်Continue reading ““ဘာကြောင့် နာရီတွေနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ လုပ်အားပေး Volunteering Record တွေက အရေးကြီးတာလဲ””
Posted bypansodan gallery August 8, 2019 March 23, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on “ဘာကြောင့် နာရီတွေနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ လုပ်အားပေး Volunteering Record တွေက အရေးကြီးတာလဲ”
Open History Project (Hpa-an), Powered by WordPress.com.